७२ वटा देशका लागि कोरियाले... :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
७२ वटा देशका लागि कोरियाले 'भाषा दक्षता' ​परिक्षा मिति तोक्यो
कोरियाले सन् २०१८ को लागि बिशेष भाषा दक्षता परिक्षा (टपिक) लेभलको मिति तय गरेको छ। ७२ वटा देशको लागि खुल्ला गरिएको भाषा दक्षता परिक्षाको लागि २ सय २३ वटा केन्द्र पनि तोकिएको छ। सन् २०१८को लागि ५ चरणमा परिक्षा मिति तय गरिएको छ। जसमध्ये ५७ औं भाषा परिक्षाको लागि अप्रिल १४ र १५ तारिख,५८ औं को लागि मे १९ र २० तारिख ५९ औ परिक्षाको लागि जुलाई १५ तारिख,६० औ को लागि अक्टोबर २० र २१ तारिख तथा ६१ औं टोपीक टेस्टको लागि नेभेम्बर १७ र १८ तारिख तोकिएको छ।
५९ औं प्रोफिसेन्सी टेस्ट भने भियतनाम, इरान,जापान,कम्बोडिया तथा थाइल्याण्ड को लागि मात्र खुल्ला गरिएको छ भने अन्य मितिका परिक्षा भने नेपाल लगाएत विश्वक ७२ वटा राष्ट्रको लागि खुल्ला गरिएको छ। बिशेष गरि कोरियामा बिदेशी हरुलाई उक्त टपिक टेस्ट विश्व विश्वविधालय भर्ना तथा जागिरको लागि आबस्यक पर्ने गर्दछ। त्यस्तै बिदेशी कामदारले पनि तोकिएका बिभिन्न लेभल हरु पास गरि आफ्नो भिसा स्टाटस परिबर्तन गर्न निबेदन दिन सक्दछन।
भाषा परिक्षा बारे थप जानकारीको www. topik.go.kr लग इन गरि हेर्न सकिने छ। टपिक तयारीको लागि अनलाइन कोर्स अध्यनको गर्न चाहने ले इंगलिस लगाएतका ५ वाट भाषामा ktband.co. kr लग इन गर्नु पर्ने बताइएको छ। त्यस्तै liveinkorea. kr बाट आफ्नो आइडी पनि बनाउन सकिने जनाएको छ।
हाल दक्षिण कोरियामा अध्यन, ब्यापार,रोजगारको शिलशिलामा करिब १८ लाखको हाराहारीमा बिदेशी हरु रहेका छन्। कोरिया सरकारले बिदेशी हरुको बसाइ लम्ब्याउन तथा रोजगारीमा सहजता ल्याउन बर्षेनी कोरियन भाषा बिसेष दक्षता परिक्षा लिदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १, २०७४, १२:२७:३१